नाति डिलन- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
डिलनको परिवारबाट अर्को कोही संगीत क्षेत्रमा आयो भन्दा अचम्म मान्ने धेरै छन् । पाब्लोको भने आफ्नै ठूलो सपना छ, आफ्नो बाजेजत्तिकै सफmल र चर्चित बन्ने ।
चैत्र १५, २०७५ हिमेश
काठमाडौँ — बब डिलनबारे के मात्र लेखिएन होला  । यी नोबल पुरस्कार विजेता अमेरिकी गायक तथा गीतकारलाई विश्व संगीतले पाएका सबैभन्दा ठूलो व्यक्तित्व मानिन्छ  ।
धेरैलाई के थाहा नहुन सक्छ भने उनीपछि उनको डिलन परिवारबाट अरू संगीत क्षेत्रमा विरलै आए । भनिन्छ, परिवारका अरू कसैलाई पनि संगीत क्षेत्रमा आउन दिइएन । एकपल्ट भाइ ज्याकोब डिलनले विद्रोह गर्न प्रयास गरे, तर उनी कता हो कता हराइहाले । अब नाति डिलनको पालो ।
त्यसो भनेको पाब्लो डिलन । उनीसम्म आइपुग्दा विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति रहेन, परिस्थिति फेरियो । तर पनि डिलनको परिवारबाट अर्को कोही संगीत क्षेत्रमा आयो भन्दा अचम्म मान्ने धेरै छन् । पाब्लोको भने आफ्नै ठूलो सपना छ, आफ्नो बाजेजत्तिकै सफल र चर्चित बन्ने । उनी बल डिलनका जेठा छोरा जेसेका छोरा हुन् । पाब्लोकै भाषामा विश्व संगीतका सबैभन्दा ठूला स्टार बन्न चाहन्छन्, उनी । धेरैले पाब्लोभन्दा तत्काल पाब्लो इस्कोबार सम्झन्छन् ।
यी नाति डिलनको नाम जुरेको ती कुख्यात व्यक्तिबाट होइन, बरु हो त पाब्लो नेरुदाबाट । उनी नोबल पुरस्कार विजेता साहित्यकार हुन् । अहिले तत्काल भने पाब्लो डिलनले नयाँ एल्बम तयार गरेका छन् र त्यसै कारणले उनी समाचारमा छाएका छन् । केही समय अगाडि पनि उनी बाक्लो चर्चामै थिए, जति बेला उनी १५ वर्षका थिए । उनी र्‍याप गीत गाउँथे र यसमै मस्तसँग डुबेका थिए । अरू आम अमेरिकी किशोर जस्तै उनी बास्केटबलका सौखिन थिए ।
उचाइले साथ नदिएर मात्र हो, उनी बास्केटबलकै खेलाडी हुन चाहन्थे । उनी सुरुदेखि नै हिपहप र आर एन्ड बी संगीतमा आकर्षित भए । उनले त्यति बेला भनेका थिए, ‘म आफ्नो हजुरबुबालाई अहिलेको समयका जेजे मान्छु ।’ धेरैले यसलाई स्वाद लिएर सुने । तर उनका गीतलाई कसैले पनि ध्यान दिएनन्, सुरुमा । आखिरमा उनी भर्खरको किशोर नै त थिए । खालि उनको परिचयमा डिलन जोडिएको थियो । पछि त्यसै कारणले उनका गीत सुन्ने पनि निस्के ।
‘त्यति बेला म पटक्कै गम्भीर थिइनँ । संगीत मेरा लागि खासै केही थिएन । अब म गम्भीर छु । म पनि
आफ्नो हजुरबुबा जस्तै हुन चाहन्छु,’ उनले हालै रोलिङ स्टोन पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । उनको एल्बमको नाम हो, ‘फाइनेस्ट समरसल्ट’ । रमाइलो के भने यसमा र्‍याप गीत छैनन् । उनी अहिले २३ वर्षका भए । केही हदसम्म परिपक्व पनि भए । उनले पुराना दिन बिर्सेर अहिले ‘फोल्क रक’ मा केन्द्रित छन् । उनको एल्बममा यसै प्रकारका गीत छन् ।
उनले संगीत सिकेको पनि आफ्नै मिहिनेतले हो, यसमा परिवारका कोही सदस्यको खास सहयोग छैन । अहिले उनी र्‍याप संगीतबाट ‘फोल्क रक’ मा किन मोडिए त ? यसबारे पनि उनले उत्तर दिने प्रयास गरेका छन् र यो गम्भीर सुनिन्छ । उनले भनेका छन्, ‘कसले के कस्तो गायो, त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । खालि काम नै ठूलो हो । कामकै लागि कसैलाई पनि पछिसम्म सम्झिने हो ।’ सायद बब डिलनको नातिबाट यस्तै उत्तर त अपेक्षा हुन्छ । अब उनले तय गर्ने बाटो भने पक्कै पछ्याउन लायक हुन्छ किनभने उनी नाति डिलन हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ १२:०३
‘टोयोटा रस’ को मुस्ताङ यात्रा
७ महिनाअघि नेपालमा सार्वजनिक गरिएको ‘टोयोटा रस’ कम्प्याक्ट एसयूभी कार हो । एसयूभी टु ह्विलर कार परीक्षणका लागि मुस्ताङसम्मको यात्रा तय गरेको हो । टोयोटा रसको परीक्षण यात्रा:
चैत्र १५, २०७५ राजु चौधरी
काठमाडौँ — अफ रोड बाटो  । त्यसमा पनि मुस्ताङ भन्ने बित्तिकै मस्तिस्कमा ‘फोर ह्विल’ जिपको झल्को आउँछ  ।
‘फोर ह्विलर’ बलिया । उच्च ‘ग्राउन्ड क्लियरेन्स’ । यी जिपहरू प्रायः अफ रोडकै लागि बनाइन्छ । बेनी, लेते, मार्फा हुँदै लेतेसम्मको बाटो नेपालको प्रमुख अफ रोडकै सूचीमा पर्छ । टु ह्विल गाडीमा अघिल्लो चक्काको सहायताले पछिल्लो चक्का गुड्छ । जसले गर्दा अफ रोडमा ‘टु ह्विल ड्राइभ’ भएका सवारी चल्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ ।
एसयूभी कारको त कल्पना नै गर्दैनौं । ‘एसयूभी रस’ ले ‘फोर ह्विलर’ को मान्यतालाई बदलिदिएको छ । टोयोटा रस अफ रोडमा पनि सहजै गुड्न सक्ने प्रमाणित गरेको छ । झन्डै ७ महिनाअघि नेपालमा सार्वजनिक गरिएको ‘रोयोटा रस’ कम्प्याक्ट एसयूभी कार हो । कम्पनीले एसयूभी टु ह्विलर उक्त कार परीक्षणका लागि मुस्ताङसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । ‘रस’ को एडभेन्चरस टेस्ट ड्राइभ । ‘रस टु मुस्ताङ’ नाम दिइएको एडभेन्चरस यात्रा फागुन २१ देखि एक साताको थियो । पहिलो रात पोखराको बसाइ थियो ।
पश्चात् सूर्यको किरणसँगै टोयोटा रसको एडभेन्चरस टेस्ट ड्राइभ भएको थियो । याक्राका त्रममा बाटोमा भेटिने मानिसहरूले रस जान सक्ने/नसक्ने बताइरहँदा मन निराश हुन्थ्यो । तर, बेनीदेखि मुक्तिनाथसम्मको अफ रोड यात्रा सहजै पार गरेको छ । ‘कच्ची बाटो र हिउँमा चिप्लिन्छ कि भन्ने डर थियो,’ याक्राकै त्रममा रहेका चालकद्वय सुरेश तामाङले भने, ‘कार ठीक छ । एसयूभी अफ रोड बाटोमा पनि सजिलै चल्न सक्ने रहेछ ।’
कारमा भएका सुविधाहरू उच्चतम भए पनि कारको मूल्य भने केही महँगो भएको टिप्पणी गरे । ‘एसयूभी कारमा सुविधा हुन्छ नै । रसमा चलाउँदा कच्ची बाटोमा पनि आरामदायी नै छ,’ उनले भने, ‘तर, मूल्यमा केही महँगो हो कि ? मूल्यबाहेक अन्य सुविधा धेरै राम्रो ।’ अफ रोडको बाटोसँगै हिउँका कारण यात्रा थप कठिन थियो । तर, रसको एडभेन्चरस टेस्ट ड्राइभ सहजै सफल भएको कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीका बिक्री तथा बजार प्रबन्धक विवेक बलामीले उकालो चढ्न सक्ने/नसक्ने ग्राहकको जिज्ञासा मेटाउन सफल भएको बताउँछन् । ‘सोरुमलगायत अन्य स्थानमा ग्र्राहकले उकालो चढ्न सक्छ कि सक्दैन जिज्ञासा गर्दै आएका छन् । त्यसैले टोयोटा रस परीक्षण गर्ने उद्देश्य थियो । पहिलो रोजाइ मुस्ताङ भयो,’ बलामीले भने, ‘बेनीदेखि कच्चा रोड सुरु हुँदा चालकहरूले समेत जान्छ कि जाँदैन भन्ने थियो । तर, रसले प्रमाणित गरेको छ । ८ सय ९५ किलोमिटरको मुस्ताङ यात्रा । बेनीदेखि कागबेनी र जोमसोमदेखि घम्बा तालसम्मको १ सय ८५ किलोमिटरको अफ रोड एडभेन्चरस टेस्ट ड्राइभ गरेको छ ।’ रस कम्फट पनि भएकाले सहज भएको उनले बताए । मुस्ताङको सफल टेस्ट ड्राइभपश्चात् नेपालको भौगोलिकमा सहजै चलाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
रसमा ७ जना सजिलै बस्न सकिन्छ । एसयूभी रस ब्याक ह्विल ड्राइभ हो । यो फोर ह्विल गाडीजत्तिकै क्षमतामा राख्ने दाबी छ । जसले गर्दा सहजै यात्रा गरेको हो । १५ सय सीसीको इन्धन क्षमता ४५ लिटरको छ । एसयूभी सेग्मेन्टको गाडी भए पनि यसको ह्विल बेस अपरोडमा गुड्ने गाडी जत्तिकै अग्लो छ । ग्राउन्ड क्लियरेन्स दुई सय २० मिलिमिटरलगायत अन्य सुविधा पनि छ । कम्पनीले करिब ७ महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको उक्त कार ४ मोडलमा पाइन्छ । कारको न्यूनतम मूल्य ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँदेखि ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ १२:०२